क्रिसमस का दुई शब्द, कसरी मनाईन्छ ? – Esewanews
Home / Headline / क्रिसमस का दुई शब्द, कसरी मनाईन्छ ?
क्रिसमस का दुई शब्द, कसरी मनाईन्छ ?
Shivaram Khadka Headline, विचार Leaveacomment 7200 Views
क्रिष्टमस एउटा सबैको निम्ति परिचित शब्द नै हो । यो दिन बिशेष गरी डिसेम्वर पच्चिस तारिक अर्थात पौष दश गते पर्छ । यो दिन संसारको मुक्तिदाता येशू क्रिष्ट जो कन्या मरियमको कोखबाट पबित्र आत्माद्धारा जन्मिनु भएको दिनलाई नै संसारमा क्रिष्टमसको नाउँले चिनिन्छ ।
सबै मानिसको निम्ति यो खुशीको दिन पनि हो । क्रिष्टमस भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसको बिचारमा बिभिन्न परिकारका मदिरा, रङ्ग, रमाइलो र प्रेमी, प्रेमीकाको साथमा आनन्द मनाउँने दिन हो, भन्ने बुझाई पनि छ । तर खास अर्थमा क्रिष्टमस के हो, र किन मनाईन्छ त ? सायद तपाईहरुको मनमा उठेको प्रश्न यो हुन सक्छ । क्रिष्टमस के हो र किन मनाउँछौं ? तपाईको मनको जिज्ञासा मेटाउने कोसिश गर्ने छु । मानिस एउटा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सुन्दर र विवेकशील प्राणी हो जसलाई परमेश्वरले सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा बनाउँनुभयो, र सृष्टिको सबै कुरा माथि मानिस जातिलाई अधिकार पनि दिनुभयो । तर मानिसमा बिभिन्न किसिमका लोभ, अभिलासा, घमण्ड र अनाज्ञाकारीताको कारण आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट अलग हुन पुग्यो ।
अब कुनैपनि उपाए थिएन कि जसले पुनः सृष्टिकर्तासंग सम्बन्ध जोडन सकोस्, तर पनि उहाँले आफ्नो सृष्टिलाई प्रेम गरिनै रहनुभयो । फेरि पनि मानिसलाई सृष्टिकर्तासंग सम्बन्ध जोडने माध्यम दिनुभयो । उहाँ स्वयम् मानिसको बिचमा मानिस नै भएर आउनु भयो, जसको बारेमा धेरै कुरा धर्मशास्त्र बाइबलमा अगमबक्ताहरुले बिभिन्न समयमा धेरै पटक क्रिष्ट येशू एक कन्याबाट पबित्र आत्माद्धारा इस्राएल देशको बेथलेहम भन्ने, ठाउँमा जन्मनुहुने छ, भन्ने भबिष्यबाणी गरेका थिए । उहाँ जन्मनुभन्दा सयौं बर्ष अघि गरेको भविष्यबाणी सोहि अनुरुप आज भन्दा २०२१बर्ष अघि क्रिष्टको जन्म भयो, यही दिनलाई क्रिष्टमस भनेर आज संसारमा मनाइने गरिन्छ, क्रिष्टमस यस अर्थमा एउटा आनन्दको खवर सुन्ने र सुनाउने दिन हो । क्रिष्टमस परमेश्वरले मानव इतिहासमा मानवै भएर प्रवेश गर्नुभएको दिन हो ।उहाँको आगमनले मानव इतिहासलाई दुई भागमा बिभाजन गरिदियो जस्तै जसको अर्थ परमेश्वरको वर्ष अर्थात इश्वी सम्बत जुन समयमा आज हामी छौं, यो सत्य कुराको साक्षी अन्य धेरै धर्मशास्त्रले पनि दिएको पाईन्छ । येशूले हरेक पापीहरुलाई पापबाट क्षमा गर्नुहुन्छ । यसैले येशू क्रिष्ट मानिसको रुप धारणा गरेर संसारमा आउनुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा गरेर हामीलाई स्वर्गको भागीदार अथवा स्वर्गको नागरिक बनाउनु हो । त्यसैको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आईकन कलवरीको क्रुशमा आँफै बलि हुनुभयो । अनि थुकाई, कुटाई, कोर्राको चोटहरु सहेर निर्दोश रगत बगाउनुभयो, त्यहि कलवरी क्रुशमा उहाँले बगाउनुभएको रगतद्धारा मानिस जातीको पाप क्षमा भएको छ । वास्तवमा मानिसको पाप क्षमाको निम्ति कुनै पनि निर्दाेश पशु प्राणीको रगतद्धारा सम्भव थिएन…। उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ ।
म संसारको ज्योति हुँ मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिड्ने छैन, त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ । हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म काहाँ आओ, म तिमीहरुलाई बिश्राम दिनेछु । यि सत्य वाणी हामी धेरै ठाँउमा पाउन सक्छौ, उहाँले मानिस जातीलाई रोग, बिमार, अशान्ति, गरिवीको श्राप, र मृत्यु बाट छुट्कारा दिन र मानिस जातीलाई मुक्तिको बाटो देखाउन यस संसारमा आउनुभयो । क्रिष्टमस सबै मानिसहरुलाई परमेश्वरबाटको एउटा अमुल्य उपहार हो । यस पटकको क्रिष्टमसमा तपाईको हृदयमा येशू क्रिष्टलाई जन्म दिनुभयो, भने मात्र क्रिष्टमसको उद्धेश्य पुरा हुनेछ । येशू क्रिष्ट दया, भलाइ, अनुग्रही र करुणाको खानी हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ ।
त्यसैले यो पटकको क्रिष्टमस विकृतीमा होइन, तर हाँसी, खुशि रमाउदै क्रिष्टको प्रेम आदान, प्रदान गरौं, जसरी येशू क्रिष्टले हामीलाई सबैलाई प्रेम गर्नुभयो । यो क्रिष्टमसले तपाईहरुको सम्पुर्ण जीवनमा नयाँ शान्ति, आनन्द आशिष् ल्याओस्, परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् । क्रिष्टमसको साथै आउँदै गरेको नयाँ साल २०२१ को हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछौं ।
१० पुष २०७७, शुक्रबार ०३:२७